पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने, ‘म ओली वा कसैले भन्दैमा निष्ठा गुमाउने मान्छे होइन’- समाचार - कान्तिपुर समाचार
पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने, ‘म ओली वा कसैले भन्दैमा निष्ठा गुमाउने मान्छे होइन’
‘रत्नाकर वाल्मीकि बन्छ भने मनाङेले पनि राजनीति सेवा गर्न किन सक्दैन भनेर मेरै पार्टीले सहयोग गरी सांसद बनायौं । सभामुख नमान्दा नमान्दै सांसदको शपथ खुवाए । नेकपामा प्रवेश गर्‍यो । पछि पार्टी फुटेपछि एमाले बन्यो । एमालेलाई नै लेबी तिरिरहेको छ । उसलाई सुधार्न र राजनीतिबाट समाजसेवामा जोड्नको लागि मन्त्री बनाएको थिएँ । उसले पछि मलाई सम्झिनेछ ।’
जेष्ठ ३०, २०७८ प्रतीक्षा काफ्ले
कास्की — गण्डकी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आफू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली वा अरु कसैले भन्दैमा राजनीतिक निष्ठा गुमाउने मानिस नभएको बताएका छन् । आइतबार मुख्यमन्त्री निवासमा सञ्चारकर्मीसँग भेटघाट गर्दै उनले कसैको दबाबमा घुँडा टेक्न नसक्ने बताए ।
आफ्नो पद धरापमा भएपछि प्रम ओलीले सत्ता टिकाउनको लागि दुई/दुईपटक संसद् विघटन गरेको र गुरुङलाई पनि त्यस्तै निर्देशन आएको हो ? भनी पत्रकारले प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा गुरुङले भने, ‘राजनीति फोहोरी खेल हो भनिन्छ तर राजनीति होइन पात्र फोहोरी हुन् ।’ नेकपा विवादित बन्दा आफ्नो सत्ता गुमेको उनको धारणा थियो ।
‘राजनीतिक नेताको कुण्ठाको कारण एमाले सरकार विस्थापित बनाइयो,’ उनले भने, ‘लोकतन्त्र विधिको शासन हो । कोरोनाको महामारीमा सत्ता परिवर्तन र केन्द्रीय राजनीति प्रदेशमा केन्द्रीत हुनु गलत हो ।’ उनले सरकारमा उभिने जोकोही नेता पनि लोकतन्त्रको पक्षमा उभिन नसक्ने बताए ।
नेता, नीति र विधिको शासनमा चल्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । बदलाको भावमा नै सरकार परिवर्तन भएको बताउँदै उनले संकटको बेलामा नै पार्टी बलियो बनाउन सकिने बताए । मुख्यमन्त्री भएपछि केन्द्रमा महत्वपूर्ण काममा बाहेक अघिपछि नगएको बताउँदै उनले अब पार्टीलाई संकटबाट जोगाउनको लागि समय आएको बताए । उनले अबका दिन केन्द्रीय राजनीतिमा केन्द्रीत हुने बताएका छन् ।
शनिबार भएको धर्ना र आन्दोलन आवश्यक नभएको बताउँदै उनले भने, ‘बहुमत पुर्‍याएपछि सरकार गठन हुन्थ्यो तर जंगली पारा देखाइयो । सरकारमा जान दुई घण्टा पनि कुर्न किन सकिँदैन ? बलको आधारमा सरकार बनाउनुपर्छ पीएसलाई हटाउनैपर्छ भन्ने देखियो ।’ मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेको विषयमा पनि क्लियर पार्दै सभामुखबाहेक अन्य ५९ सांसदले नै दाबी गर्न सक्ने बताए । ‘मैले हाम्रो पार्टीको २७ जना सांसदको विवरण बुझाएको हुँ,’ उनले भने । उनले गठबन्धनबाट बनाइएका सरकार जुनसुकै बेला पनि परिवर्तन हुन सक्ने बताए । उनले आफूलाई जसपाले समर्थन गरेको पत्र भने नबुझाएको बताए ।
उनले प्रदेश संघीयताको अभ्यास भएकाले पहिलो कार्यकाल ५ वर्ष नै बिताउनुपर्ने भएकाले संसद् विघटन गर्ने योजना नरहेको सुनाए । ‘संघीयता बलियो बनाउनुपर्छ भनेर संघ सरकार र आफ्नै पार्टीका नेतासँग लड्ने मान्छे हुँ,’ उनले भने, ‘मैले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकिँन । आफ्नो स्वार्थको लागि संसद् विघटन गर्न सक्थिँन । प्रदेशले नै संघीयताको औचित्य पुष्टि गर्छ । संघीय शासन प्रणलीको पहिलो अभ्यास हो ।’ उनले मुलुकमा अस्थिरता रहेको बताउँदै संघीयतामाथि चारैतिरबाट आक्रमण भइरहेको बताएका थिए ।
गुरुङले प्रतिपक्षमा भएर केही गरेन भनेर बारम्बार विरोध गर्नेहरुलाई अब दुःख के हो ? सरकार चलाउन कतिको सहज हुने रहेछ ? संघले कति सहयोग गर्नेरहेछ ? अब बुझ्ने मौका पाउने बताए । ‘प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्छौं,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री छाड्दैमा म जिम्मेवारीबाट हट्दिँन । मेरो साथ र सहयोग रहनेछ । संघीयता बलियो बनाउने पक्षमा म सरकारकै पक्षमा उभिनेछु ।’ यसो त उनलाई साथ दिएर मन्त्री मण्डलमा समेत सामेल भएका राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)ले अप्ठ्यारोमा साथ छाडेको बताए ।
‘रत्नाकर वाल्मीकि बन्छ भने मनाङेले पनि राजनीति सेवा गर्न किन सक्दैन भनेर मेरै पार्टीले सहयोग गरी सांसद बनायौं,’ उनले भने, ‘सभामुख नमान्दा नमान्दै सांसदको शपथ खुवाए । नेकपामा प्रवेश गर्‍यो । पछि पार्टी फुटेपछि एमाले बन्यो । एमालेलाई नै लेबी तिरिरहेको छ । उसलाई सुधार्न र राजनीतिबाट समाजसेवामा जोड्नको लागि मन्त्री बनाएको थिए । उसले पछि मलाई सम्झिनेछ ।’
मनाङेले आफूबाट धेरै कुरा सिक्ने अवसर पाएको उनले बताए । राजनीति बुझेको छैन भनेर हरेक गल्तीमा पनि मनाङेलाई कारबाही नगरेको उनको भनाइ थियो । जाँदाजाँदै गुरुङ नयाँ बनेको सरकारलाई संघीयताको मर्मअनुसार काम गर्न सुझाव दिएका छन् । हरेक नियुक्तिहरु मापदण्ड अनुसार नै गरेको बताउँदै उनले सरकारको लक्ष्य अनुसार काम गर्न सके ५ वर्षभित्र ठूलो परिवर्तन गर्न सकिने बताए । ‘प्रतिपक्षको नेता हुँदा सत्ता टिकाउन मात्र काम गरेको छ भन्नुहुन्थ्यो अब हेर्छु कसरी सरकार चलाउनुहुन्छ,’ उनले भने । संघबिना प्रदेश सरकार चलाउन असम्भव हुने उनको तर्क थियो । प्रदेश सरकार स्वायत्त रही बहुवर्षीय योजनालाई प्राथमिकता दिन सकेमा सरकार सफल बन्ने उनले बताए ।
प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७८ १३:३८
कोरोना कहरमा बढ्दो छटपटी
मनोचिकित्साको क्षेत्रमा काम गर्ने विज्ञका अनुसार मानसिक भय, अवसाद र मनोघात भोग्नेहरूको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भइरहेको छ
जेष्ठ ३०, २०७८ जनकराज सापकोटा
काठमाडौँ — बालाजु बस्ने ममता (नाम परिवर्तन) लाई हिजोआज छिनमै रिस उठ्छ, छिनमै दिक्क लाग्छ । महिना दिनभन्दा लामो निषेधाज्ञामा घरभित्रै बस्दाको छटपटीले मात्रै होइन, आफन्त र साथीभाइ कोरोना संक्रमित भएको, उपचार पाउँदा अनेकन् सास्ती खेपेको र कतिपयको मृत्यु भइरहेको समाचार पढ्दा र सुन्दा उनलाई भित्रभित्रै डर लागेर आउँछ ।
आफू पनि संक्रमित भइसकेको छु कि, कतै उपचार नपाएर मरी पो हाल्छु कि भन्ने डरले उनलाई बेलाबेला झ्याप्पै समातेजस्तो हुन्छ । गत साता एक साथीको सहयोगमा मनोपरामर्श लिएपछि भने उनले शान्ति महसुस गरेकी छन् ।
मनमा डर बोकेर निषेधाज्ञाका विरक्तलाग्दा दिन कटाउने ममता एक्ली पात्र होइनन् । कोरोना संक्रमण तीव्र बन्दै गएको, संक्रमितको मृत्युको ग्राफ नघटेको र समग्र स्वास्थ्य सेवा नै प्रभावित बनेको खबरले धेरैलाई मनोसामाजिक समस्या थपिदिएको छ । यस्तो समस्या खेप्नेहरूको आँकडा सार्वजनिक नभए पनि मनोचिकित्साको क्षेत्रमा काम गर्नेहरूका अनुसार मानसिक भय, अवसाद र मनोघात भोग्नेहरूको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भइरहेको छ ।
सेन्टर फर मेन्टल हेल्थ एन्ड काउन्सिलिङ नेपालका कार्यकारी निर्देशक रामलाल श्रेष्ठ कोरोना संक्रमणको दर घटे पनि यस अवधिमा देखा परेको मनोसामाजिक समस्याको प्रभाव समाजमा लामो समय रहने बताउँछन् । संक्रमणको बढ्दो रफ्तारका माझ मृत्यु भएकाहरूको परिवारका सदस्य र आफन्तमा पर्ने मानसिक आघातको पीडा भयावह हुने उनले बताए । त्यस्तो आघातको असर मृतक श्रीमान् भए श्रीमतीमा, श्रीमती भए श्रीमान्मा, मृतकका बाबुआमा वा छोराछोरीमा मात्रै नभएर परिवारका अन्य सदस्य, साथीभाइ र समाजमै धेरथोर पर्ने उनको भनाइ छ । उनको संस्थाले १६६०१८५०८० नम्बरको टोल फ्री नम्बर सञ्चालन गरेको छ । यो नम्बरमा प्रत्येक दिन त्रास महसुस हुने गरेको बताउँदै सल्लाह माग्नेका ४/५ वटा कल आउँछन् । कोरोना संकटमा हुर्किएको मनोसामाजिक समस्या समयमै हल नगर्ने हो भने यसले परिवार हुँदै सिंगो समाज प्रभावित पार्ने श्रेष्ठले बताए ।
लगनखेलस्थित मानसिक अस्पतालका वरिष्ठ मनोचिकित्सक डा. वासुदेव कार्की कोभिडले पैदा गरेको त्रासको मनोवैज्ञानिक समाधान खोज्न जरुरी भइसकेको बताउँछन् । उनले बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकमा मानसिक स्वास्थ्य र मनोसामाजिक समस्या देखा पर्ने सम्भावना बढी हुने बताए । उनका अनुसार व्यक्तिका विचार, भावना र व्यवहारमा परिवर्तन आएमा, त्यस्ता परिवर्तन केही दिनसम्म स्थिर रहेमा र त्यसले दैनिक जीवनयापन, पारिवारिक सम्बन्ध, उत्पादनशीलतामा कमी आएमा आफूभित्र समस्या छ भनेर बुझ्नुपर्छ । ‘धेरै जना त गलत र भ्रमपूर्ण सूचनाका कारण पनि आत्तिएका छन्,’ उनले भने, ‘भय पैदा गर्ने समाचारबाट परै बस्नु राम्रो ।’ मानसिक अस्पतालले घरमै बसेर मनोसामाजिक परामर्शका लागि ११६६ नम्बरको नि:शुल्क हटलाइन नम्बर सञ्चालनमा ल्याएको छ । पछिल्लो एक महिनामा यो नम्बरबाट १ सय ९४ जनाले नि:शुल्क परामर्श लिएको उनले बताए ।
नि:शुल्क मनोसामाजिक परामर्श दिइरहेको संस्था राष्ट्र निर्माण मञ्च नेपालका अध्यक्ष निर्मलकुमार उप्रेतीले पछिल्लो निषेधाज्ञामा सयभन्दा धेरैलाई नि:शुल्क मनोपरामर्श दिएको बताए । उनका अनुसार कतिले मरिन्छ कि भन्ने डर लागेको कुरा बताए भने कतिले भोलि के गर्ने होला भन्ने चिन्ताले गालेको सुनाए । कतिले घरायसी झगडाका कारण तनाव बढेको बताएका थिए । निषेधाज्ञाका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जान रोकिएको, आफ्नो पैसा फसेको र मानसिक तनाव बढेको भनेर समस्या राख्नेहरू पनि सम्पर्कमा आएका थिए । ‘कोरोनाको अलावा उपचार नपाइएला भन्ने डरदेखि जीविकोपार्जनको चिन्ता, घरभित्र बस्दाको दिक्दारी, अनिश्चित समय र भविष्यको छटपटीले धेरैलाई सताएको देखिन्छ,’ उप्रेतीले भने । उनका अनुसार यस्तो समस्या भए ९८८१२१७२६६, ९८२३४८१७४७, ९८४३५८६९०२ नम्बरमा फोन गरेर नि:शुल्क मनोपरामर्श लिन सकिन्छ ।
मनोपरामर्शको क्षेत्रमा काम गरिरहेको बहुसांस्कृतिक मनोसामाजिक संस्था नेपाल (टीपीओ नेपाल) ले कोरोनाको पहिलो लहरमा ७ प्रदेशका २ हजार १४ जनामाझ अनलाइन सर्वेक्षण गरेको थियो । जसमा तपाईंलाई कस्तो अनुभव भइरहेको छ भन्ने प्रश्नमा चारवटा उत्तर छनोट गर्ने अवसर दिइएको थियो । पहिलो थियो, डर वा त्रास, दोस्रो अन्योल तथा चिन्तित, तेस्रो दिक्क, खिन्न, नरमाइलो महसुस र चौथो छटपटी, महसुस विकल्प राखिएको थियो । सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ३२ प्रतिशत उत्तरदाताले चारमध्ये दुईवटा लक्षण आफूमा देखिएको बताएका थिए भने ५० प्रतिशतले चारमध्ये कम्तीमा एक लक्षण आफूभित्र रहेको बताएका थिए ।
महामारीको पहिलो लहरमा काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि सर्वेक्षण गरेको थियो । ३२ नम्बर वडाका ६ सय २६ जनामा गरिएको सर्वेक्षणमा घरभित्रै रहनुपर्ने बाध्यताका कारण २९ प्रतिशत उत्तरदाताले आफ्नो परिवारमा मानसिक समस्या परेको कुरा व्यक्त गरेका थिए । यो नजिताले संक्रमणको ग्राफ र त्यसबाट हुने मृत्युदरसमेत उच्च रहेको दोस्रो लहरमा मानसिक समस्या पर्ने परिवारको संख्या झनै बढेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । टीपीओ नेपालका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रमोद गौतमले पहिलोमा भन्दा दोस्रो लहरमा संक्रमित र मृत्यु हुनेको संख्या उच्च भएकाले त्यसले समाजमा थप भय पैदा गरेको र मनोसामाजिक समस्या बढेको सुनाए । उनले भने, ‘हामीले सञ्चालन गरेको टोल फ्री नम्बरमा परामर्श लिनेहरूले पनि आफूलाई डर लाग्ने, आत्तिने र छटपटी हुने जस्ता समस्या देखिएको बताउने गरेका छन् ।’
टीपीओले हरेक दिन बिहान ८ देखि बेलुका ६ बजेसम्म टोल फ्री नम्बर १६६००१०२००५ सञ्चालनमा ल्याएको छ । संस्थाबाट खटिएका ३ जना मनोपरामर्शदाताले फोनमा आएका समस्या समाधानको पहल गर्छन् । डा. गौतमले कोरोना संक्रमणसँगै व्याप्त भयले मानिसमा एन्जाइटी र डिप्रेसन बढिरहेको बताए । बेरोजगार र विपन्नता बढ्दै जाँदा र लामो समय घरभित्रै थुनिएर बस्दा पनि यस्ता समस्या वृद्धि भएको हुन सक्ने उनले बताए ।
प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७८ १३:२२